Faallo: Madaxweynaha wanaagsan iyo astaamaha lagu dooran karo! | Warfaafiye
Warfaafiye Qormooyinka	Faallo: Madaxweynaha wanaagsan iyo astaamaha lagu dooran karo!
Jul 15th, 2012 – by admin0
Wax ka yar 40 maalmood ayaa ka harsan xiliga Soomaaliya ay yeelan doonto Dowlad cusub oo Madaxweynaheeda la dooranayo 20-ka Agoosto hadii aysan dib u dhigin kuwa danahooda ku fushanaya iney kursiga sii fadhiyaan.
50 Musharax oo badankood damac ugu jira iney mansab sare iyo hanti tacbasho ka gaaraan xilka Madaxweynenimo ee umadda u qabanayaan, hase ahaatee waxaa loo baahan yahay in la isweydiiyo sidee looga hortegi karaa kuwaas iyaga ah ee umadda saxriirinaya, sideese lagu heli karaa Hoggaamiye Qaran oo xalaal ah?.
Musharaxiinta xiligan intooda badan ee looga cabsi qabo iney hantaan Kursiga sare waxaa lagu xantaa Damiir laawayaal la heshiiyay caddowga, balse adag sida lagu garto, waayo Magaca ayey Soomaali ka yihiin, qalbigana shisheeye, waxayna qandaraas kusoo qaateen in ay sii wadaan midnimo la’aan, burburka dalka, kala qeybinta, iibinta xeebaha, dhulka iyo iney ka shaqeeyaan danaha caddowga ay u adeegayaan.
Si loo helo Hoggaamiye xambaarsan heybad qaran, qalbi Soomaalinimo leh, ka nadiifsan u adeegida caddowga shisheeye iyo danaha qabiil waa inuu leeyahay astaamo lagu soo xulan karo muuqaal iyo mid qalbi, iyadoo la eegayo tin iyo cirib taariikhdiisa fog iyo midda danbe.
Hoggaamiyaha wanaagsan waxaa lagu kartaa erayo uu bulshada ku kasbanayo hadii aysan ka muuqana heybadaasna ma noqon karo Hoggaamiye bulsho, waa inuu yahay aftahan shacabka tusin kara himilo qaran iyo horumar bulsho, ku dhegan caqiidada iyo dhaqamada suubban, dadkuna is weydiiyaan muxuu qibrad ah oo uu leeyahay, sumcad intee la eg ayuu bulshada ku dhex leeyahay, maka muuqdaan wadan jaceyl iyo dad jaceyl Soomaaliyeed iyo arrimo badan oo aas aas u ah.
Hooggaamiyeyaasha nasoo maray waxyaabaha siyaasadahooda cuuryaamiyay waxaa ugu horeeya qabyaalad, nin jacleysi, ku tagrifalid hantida qaran, musuqmaasuq iyo naasnuujin jufo hoosaad ama bah wadaag, dhamaan arrimahaasina waa tan hoos u dhigtay waxqabad la’aanta maamuladii dalka soo maray ee u danbeeyay, intaasna ay u sii dheer tahay fulinta casharo ay u soo dhiibaan dalalka shisheeye, gaar ahaan kuwa deriska ah.
“Haddii aan doorashada Madaxtinimada ku guuleysto mushaarkeygu wuxuu noqon doonaa hal dollar” erayadaas waxaa laga hayaa Prof. Axmed Ismaaciil Samatar oo ka mid ah Musharaxiinta, dadkasu ma isweydiiyeen erayadii ka horeeyay ee Madaxweyneyaashii hore ku hadaaqi jireen xiligey doorashada u tartamayeen, maanta kan ugu yar wuxuu qasri ka dhistay meel ka baxsan dalka Soomaaliya, eryada Prof. Axmed Ismaaciil-na waa kuwo shacabka calaamad su’aal saaray.
Waa nasiib daro in maanta Musharaxiinta dalka qaarkood ineysan warba u hayn xaalada dalka, maadaama qurbo joog wada yihiin, Wadaniyadda oo ay aad ugu yar tahay. Nasiib darrada jirta ayaa ah, kuwa maanta shacabka u afduuban ee iyagana doonaya in la doorto ayaa u xil saaran iney dhanbalaan sidii badarkana u haadiyaan si loo garto musharaxa la dooranaayo inuu yahay Soomaali dhab ah, kana nadiifsan qabyaalad, adeecid shisheeye IWM.
Murashaxa tartamaya marka hore waa inuu ogaadaa ama aqoon u lahaada jagada madaxnimo ee uu tartanka u galaayo waxay tahay, shuruudaha looga baahan yahay iyo haddii uu guuleysto waxa laga doonaayo inuu la yimaado. Madaxweynaha wanaagsan waa midka markiisa hore faham dhammeystiran ka heysto xaaladda waddankiisa, baaxaadda burburka iyo in waxa burburay ee dowlad la’aanta muddada rubac qarniga ku simani sababtay aysan ahayn kaliya wax fiisikaal ah oo muuqda, bal inay tahay akhaaliqiyaadkii iyo mooraalkii mujtamaca.
Si taas loo xaliyaana ay tahay wax adag oo u baahan maskax fiyow oo cabqriyad ah, daacad ah, welibana xor ah, isku kalsoonina ka muuqato. Barnaamijka yoolka ah ee u baahan in laga miro dhaliyo ayaa u baahan inuu noqdo mid waafaqsan duruufaha saameeya dib u dhiska iyo dhaqan celinta dhinac walba ah ee dalkeena, xag amaan, siyaaso, difaac, caddalad, waxbarasho, caafimaad iwm.
Waxa laga gudbaayo kuma dherarsano kaliya isbeddel saameeya xagga magacyada dowladda, bal waxay tahay, in laga guuro duruufo marxali ah, kuwaasoo sawiro xunxun ka bixinaya taariikhda nolosheenna iyo muuqaalaha colaadaha siyaasadeed ee weli baaqiga ah. Inuu yahay waddan u gudbaayo xaalad tayeysan ee leh madaxbannaani cusub iyo isbeddel siyaasadeed ee hore leh. Laga xoroobaa gun iyo baarba, gebi ahaan ammaan darrada dalkeena uga imaaneysa dhaqamada qaribaadda ah, lehna dabeecadaha aragagaxisimada, faragelinta dalalka deriska ah, qabyaaladda, cudurka, faqriga iyo jaahalnimada iwm.
Shaki la’aan arrimahaasi la iskuma haayo inay yihiin xil culus oo dhabar-adeeg u baahan, murashaxii intaas fahmi karana, ficil wax ku oolna u rogi kara rajada la hiigsanaayo ee ah in la xaqiijiyo xasilooni dhinacyada amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo dhib u dhiska iyo laba daraadle dhinaca ayaaha barwaaqeynta waddanka ayaa noqon doona mid taariikhda Soomaaliya meel sare ka geli doona.